त्रिविका शिक्षाध्यक्षलाई पाँच हजार जरिवाना
काठमाडौं, मंसिर २९ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्षलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न आदेश दिएको छ । सूचना लुकाउने कार्यमा संलग्न भएको, आयोगको आदेश, पत्राचारको बेवास्ता गरी विषयान्तर
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सेमेष्टर प्रणालीको परीक्षा अवधि घटाइने
काठमाडौं, मंसिर १८ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायको सेमेष्टर प्रणालीको परीक्षा अवधि घटाइने भएको छ । विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले कोरोना सङ्क्रमण अवधिमा परीक्षाको प्रावधान परिवर्तन गर्न सक्ने अधिकार दिएसँगै व्यवस्थापन
त्रिवि सेवा आयोगद्वारा २४० परीक्षार्थीको परीक्षा रद्द
काठमाडौं, कात्तिक २६ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले उपप्राध्यापक पदका लागि लिएको लिखित परीक्षामा मर्यादा उल्लंघन गरेको भन्दै २४० परीक्षार्थीहरुको परीक्षा रद्द गरेको छ । बुधबार एक सूचना जारी गर्दै
त्रिविमा हाजिर हुन पीसीआर परीक्षणको नेगेटिभ रिपोर्ट
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कर्मचारीले हाजिर हुनु पहिले पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट पेश गर्नुपर्ने भएको छ । कोरोना संक्रमण देखिएका कर्मचारीले हाजिर गर्नु पहिले कोरोना नेगेटिभ आएको रिपोर्ट देखाउन त्रिवि रेक्टर
उपप्राध्यापक चलाउनेलाई कुटपिट गर्ने दुईजना पक्राउ
काठमाडौं, असोज २६ । प्रहरीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेलाई कुटपिट गर्ने दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले यही असोज २० गते त्रिवि परिसरभित्र त्रिवि
उपप्राध्यापकमाथि आक्रमणबारे उपकुलपतिको ध्यानाकर्षण
काठमाडौं, असोज २२ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक प्रेमबहादुर चलाउनेमाथि आक्रमण गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्न प्राध्यापक संगठनले बिहीबार उपकुलपति प्रा. डा. धर्मकान्त बाँस्कोटालाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । दोषीलाई
काठमाडौं, असोज १९ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले स्थगित राष्ट्रिय कविता महोत्सव आगामी मंसिरको चौथो साता भौतिक दूरी कायम गरी सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त महोत्सव प्रज्ञा भवन, कमलादीमा
काठमाडौं, असोज २ । नेपाल विद्यार्थी संघले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटालगायत पदाधिकारीको कार्यालय प्रवेशमा अवरोध गरेको छ । शुक्रबार उपकुलपति कार्यालयअगाडि सडकमा टायर बालेर नेविसंघ त्रिवि समितिले प्रदर्शन गरेको
आंशिक प्राध्यापकको भएन करार सम्झौता
दिपेन्द्र अधिकारी (ईमेज)काठमाडौं, भदौ २१ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कार्यरत आंशिक प्राध्यापकलाई अब करार नबनाइने भएको छ । आंशिक प्राध्यापकहरुको आन्दोलन सम्बोधन गर्न त्रिविले अतिरिक्त कक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको थियो
काठमाडौं, भदौ १३ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)को वार्षिक परीक्षा दसैं पछाडि हुने भएको छ । कोभिड–१९ को संक्रमण बढ्न थालेपछि तत्काल वार्षिक परीक्षा सम्भव नभएपछि दसैं पछाडि नै परीक्षा गर्ने